बृद्ध नेता दाहाललाई कुट्ने वाग्लेलाई प्रहरीको साथ | NepalDut
बृद्ध नेता दाहाललाई कुट्ने वाग्लेलाई प्रहरीको साथ
नेपालदूत , काठमार्डौं
नेपाली कांग्रेसले सोमबार मेलमिलाप दिवस मनाइरह“दा उक्त पार्टीका एक बृद्ध नेता कांग्रेस समर्थक म्यानपावर ब्यवसायीबाट कुटिएका छन् । म्यानपावर ब्यवसायी हंसराज वाग्लेले नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता तुलाराम दाहाललाई कुटपिट गरेका हुन् ।
निर्वासनमा समेत बसेका नेता दाहाल रेसुंगा रेष्टुरेन्टमा साथीहरुसँग खानपिन गरिरहेका बेला २०७५ पुस ७ मा वाग्लेले एक्कासी गएर उनीमाथि कुटपिट गरेका थिए । म्यानपावर जगतमा गुण्डागर्दीको छवि बनाएका वाग्लेको कुटपिटको शिकार भएका दाहालले महानगरीय प्रहरी बृत्त बानेश्वरमा जाहेरी दिए ।
ठाडो निवदेन प्रहरीले बुझेर वाग्लेलाई सोधपुछका लागि ल्याउनुपर्नेमा प्रहरीले वास्ता नै गरेन । बरु डीएसपी गोविन्द काफ्लेले उल्टै वाग्लेको पक्ष लिएर ६९ बर्षीय बृद्ध नेता दाहाललाई मानसिक टर्चर दिने काम गरेको पीडितले बताएका छन् ।
वाग्लेको कुटपिटको शिकार दाहालले काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाटै वाग्लेलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाही गर्ने पत्र लिएर गएपछि डीएसपी काफ्लेले छलफलमा बोलाएका थिए ।
स्व. खुमबहादुर खड्कासँग निर्वासनमा बसेका दाहालले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समेत आफूमाथि कुटपीट भएको गुनासो गरेका थिए ।
प्रजिअले पत्र काटेपछि पनि डीएसपीले दाहाललाई न्याय दिने कुरा नगरी हप्की दप्की गरेको उनले गुनासो गरेका छन् । हंसराज वाग्लेले गोरखा घर भएका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र भण्डारी मार्फत् दाहाललाई फोन गरी सम्झाउन खोजे ।तर उल्टै दाहालले म्यानपावरको पैसा खाएर मलाई सम्झाउने, जिल्लामा कुनै हैसियत नभएको भन्दै थर्काइ दिएका थिए ।
वाग्लेले डा. प्रकाश शरण महतलाई पनि फोन गर्न लगाएका थिए । तर महतले भने पनि दाहाल उनलाई क्षमा गर्न तयार भएनन् । बरु म्यानपावरको प्रभावमा परेको भन्दै उनले महतलाई समेत थर्काउन बाँकी राखेनन् ।
भण्डारी र महतले भन्दा नमानेपछि वाग्लेले हंसराज वाग्लेले तरुण दलकी नेतृ लक्ष्मी खतिवडालाई लिएर गए । खतिवडाले सुरुमा कुटाई खाने पुराना पार्टीका नेता हुन् भन्ने कल्पना समेत गरेकी थिइनन ।
तर दाहालले कुटाइ खाएको थाहा पाएपछि हंसराज वाग्लेलाई झपारिन् । पीडित दाहालका आफन्तले औषधि उपचारबापत ३ लाख भन्दा बढी दाबी गरेको भए पनि १ लाख रुपैयाँ मात्र दिनेगरी उनले मिलापत्र गराइन् । तर मिलापत्र लगत्तै पैसा दिने भनेका वाग्ले त्यसपछि बेपत्ता भए ।
ज्याकेटमा पैसा छ भनेर खतिवडाले मिलापत्र गराइन् । तर सही गरिसकेपछि पैसा छैन भन्दै वाग्ले बेपत्ता भए । त्यसपछि पैसा माग्दा वाग्लेले उल्टै थर्काउने, मनपरी मुख छाड्ने र निहुँ खोज्ने गर्न थालेका छन् । प्रहरी मेरो साथमा छ भन्दै उनले उल्टै पीडित दाहाललाई फेरि पनि कुट्ने भन्दै तर्साउन थालेका छन् ।